မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ပျော်ပျော်ပါးပါး မော်တော်ကားနဲ့ကွယ်
လျှောက်လည်တာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တောင် မထားတော့ဘူး။ ကုန်ပါပြီဗျာ..
ံHaveanice trip !!! :-)
ဟေး... ပျော်စရာကြီး..ကျိုက်ထီးရိုးက လွဲလို့ ခုပြောတဲ့နေရာတွေရောက်ဖူးသေးဘူး... ပုံရိုက်ခဲ့နော်..း)ပီကီနီလေးနဲ့.. ဟား..ဟား
Share merits to me after seeing Kyaik-Htee-Yoe n other pagodas.:)
သွားနိုင်ကြပါစေ ... သွားနိုင်ကြပါစေ ... နာလိုဘူး ... ဟွန်း ... ပြန်လာလည်မှ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်သွားမယ် ( ကားမစီးဘူး ) ... စတာပါ ... ပျော်ရွှင်ပါစေ မမီရေ။
ဟေး ... ဒူးရင်းယိုဝယ်ခဲ့ဟေ့ ...
ပြန်လာရင် ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တင်ပေးပါ။
ဒီနေ့ မနက် အစောကြီး 2နာရီမှာ ပြန်ရောက်တယ်ဗျို မှာတာတွေ ၀ယ်လာတယ် ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တင်ပါမယ် ခဏစောင့်ပေးနော်..နော် (ခရီးသွားနေတုန်း ဘလော့မှာ လာလည်သွားတဲ့ ချစ်တယ်ရင်းများအားလုံးကို ပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက်လဲ အမျှပေးပါတယ် အမျှရလို့ ထပ်ထူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေနော်)